နှုတ်ကသာ “မလွမ်းလောက်ပါဘူး….”လို့ စိုင်းစိုင်းသီချင်းကိုလိုက်ရွတ်နေမိပေမယ့်…. မင်းကို ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိတောင် သေမလောက်လွမ်းနေသလဲ မင်းသိလား……။ ပြောပြန်ရင်လဲ ခံစားမှုကို မချဲ့ကားပါနဲ့လို့ အပြစ်ဆိုကြဦးမယ်….။ ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုသာ ချဲ့ကားရေးရမယ်ဆိုရင် ရေးစရာနေရာတောင်မလောက်ပါဘူး…။
အဝေးတစ်နေရာကနေ မင်းမဲ့ပြုံးပြုံးပါ……။ ဘယ်လိုပဲပြုံးပြုံး မင်းအပြုံးတွေက အမြဲတမ်းကိုယ့်အတွက် အဖြူရောင်ပဲ…အိန်ဂျယ်…..။ ခုချိန်မှာ နှင်းတွေဘယ်လောက်ဝေေ၀….ပန်းတွေဘယ်လောက်ပွင့်ပွင့် ကိုယ့်အတွက် ဘာမှအဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ဘူး….။ သီချင်းတွေလိုက်နားထောင်ကြည့်တယ်….တစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ်…. တစ်ပုဒ်ပြီးတော့ တစ်ပုဒ်….. ။ ကိုယ်နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းတွေက ဘာကြောင့်အလွမ်းသီချင်းတွေ အသည်းကွဲသီချင်းတွေချည်းဖြစ်နေရတာလဲ……။ အလွမ်းတွေကို ခုံမင်မက်မောလှချည်ရဲ့ဆို….ခုတော့ လွမ်းရမှာ သိပ်ကြောက်နေမိတယ်တဲ့…..။ သိပ်ကြောက်နေလဲ…အတွေးတွေကတော့ အလွမ်းတွေဆီ….အတောင်ပံဖြန့်ကျက်လို့ရယ်…..။
“ဟို…အရင်ချိန်တွေ တမ်းတမက်မော….” လို့ ဒွေးဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို သတိရသွားတယ်…..။ ဟုတ်တယ် အရင်တုန်းကဆို ဒီလိုညဖက် ကိုယ်စာတွေရေးနေတတ်တဲ့အချိန်တွေမှာ မင်းကိုယ်နဲ့စကားလာပြောတတ်တယ်…။ ကိုယ်တို့ ကော်ဖီအတူသောက်ကြတယ်….။ ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းတွေပြောရင်း… တခါတခါစကားကြောတွေမတည့်ကြဘဲ… သုံးလေးရက်တစ်ပတ်လောက်စကားမပြောဖြစ်ကြပြန်ဘူး…တိတ်တိတ်ကလေးစိတ်ကောက်ကြတယ်…။ အဲလိုအချိန်မျိုးကို… ကိုယ်ဘယ်တော့မှ…ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးတဲ့…..။
Posted by coral nyo at 02:33
ချမ်းအေးလွန်တယ် အိန်ဂျယ်ရယ် ။
ဟိ လွမ်းနေသူကို ထပ်လွမ်းအောင်လုပ်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့နော် ။
အိန်ဂျယ်နဲ့လည်း ကောက်ကြတယ်ပေါ့ :P xD
လက်ရှိအချိန်တွေကို တန်ဘိုးထားနိုင်ပါစေမိုးငွေ့ရေး)
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ နူးညံ့တဲ့ ငြင်းခုန်မှုကို သူလည်း တမ်းတနေမှာပါ မီးမီးရာ
18 December 2012 at 01:37